KwaEnoki akwira | Apg29
Zvakafanana ne Enoki. "Iwe vamuona iye ndikasazovapo." Iye chete akanyangarika pasina zvikasawanirwa.
Zvakafanana ne Enoki. "Iwe vamuona iye ndikasazovapo." Iye chete akanyangarika pasina zvikasawanirwa. Saka zvichava apo Jesu anobvisa mhuri yake kubva panyika. Kuruboshwe kuchaita chete kuona kuti vanhu vari pakarepo aenda.
Vakadzungaira muchiwadzana Mwari
Enoki, wechinomwe kubva kuna Adhamu aiva munhu aifamba kuyanana naMwari. Upenyu hwake hwose kuti kuda kwaShe. Tinoverenga pamusoro pake KJV, vaHebheru. 11: 5:
"Nokutenda Enoki akatorwa kuitira kuti arege kuona rufu, uye akamuwana ndikasazovapo nekuti Mwari wakamutora. Nokuti asati atorwa, akanga uchapupu kuti zvakafadza Mwari. "
Enoki haana kufa
The Abel akarurama, yakanyorwa yapfuura ndima akapondwa munin'ina wake Kaini uye akafira kutenda kwavo. Asi Enoki haana kufa zvachose.
In nuBibeln anoti, "iwe kumuwana," uye muna 1917 shanduro: "vakamuona ndikasazovapo."
Kuti hamuna kuwana Enoki, kana aifanira kureva kuti vakanga vachimutsvaka, asi pasina kubudirira. Aiva uye akaramba vasisina.
Kana kubvutwa zvinoitika, ane havangaverengwi revanhu kuti kuronda inonyangarika kubva panyika. Icho revanhu ruponeso kuti Jesu akabvisa. Pachava mhirizhonga panyika. Mijenya vanhu kusuwa dzavo. Vaya asiyiwa achatsvaka chipatapata kuti vadiwa vavo.
Asi havangariwani navo. Vachadanidzira vachiti, "Ndokupi vabereki vangu vari?", "Uripiko vana vangu?", "Where hama dzangu dziri?" Varipiko shamwari dzangu? "
Vakawanda havana kugadzirira
Vanhu vazhinji havana kuva vakagadzirira kana kubvutwa kunoitika, kana kukotsira, vanozviti vaKristu. Vangave vakafunga kuti minyengetero amai uye upenyu hwakarurama aBaba aigona kuvabatsira kudenga. Kana kuti zvakanga zvakakwana kuti kazhinji chitendero, nemutsa uye akanaka uye kuita zvakanakisisa sezvavaigona.
Tinoverenga kuti yaiva "nokutenda Enoki akatorwa." Kuenda naJesu anobvisa mhuri yake kubva panyika vanofanira kuva nokutenda mupenyu muna Kristu. Unofanira kugamuchira kwaari seMuponesi wavo. Enoki akabatwa nokuti "akafamba naMwari," uye "kuti zvakafadza Mwari."
The Bible rinotaura zvitatu denga nzendo: hwaEnoki kudenga, muprofita Eriya kudenga, nokukwira kwaJesu. Isu vari vakadzikinurwa vazhinji vachakuitiraiwo nokukwira, Jesu fetches isu kubudikidza yekubvutwa.